Ngaba Kukhuselekile Umhlambi? | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-30 kaDisemba ngo-2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiyabuthanda uburharha bukaGary Larson ukusuka Icala elikude udumo:
Iinkampani kuthiwa zibeka emngciphekweni kwaye sonke sinemiqathango yokuba ngandlela thile ukhuseleko kumanani:
Bangaphi abathengi onabo?
Unexesha elingakanani useshishini?
Nceda usinikeze iimbekiselo.
Sibonelele ngezifundo zesampulu ezihambelana nomzi mveliso wethu, ubungakanani benkampani, imveliso, inkonzo, njl.
Sifunde eli nqaku [ukufaka inkampani enkulu] ebonelela ngokuchaseneyo, nceda ucacise.
Makhe sijonge imizekelo yomhlambi, kwaye ngubani ebesilandela iminyaka:
Abasebenzi beZizwe eziManyeneyo
Iqela leenkonzo zezezimali zePNC
EUnited States Urhulumente
Hayi enkosi, andizukulandela mhlambi naliphi na ixesha kungekudala.
Igama lam eliTandathu liQalise kwakhona
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2008 ngo-11: 03 AM
Ngaba imithombo yeendaba zentlalo ayisiyo mhlambi usebenza ngokukuko? Ndiyavuma ukuba ukulandela umhlambi ayisiyiyo, iyodwa, yinto entle ukuyenza, kodwa kuninzi ekumele kuthethwe ngemihlambi kunye nodumo. Umhlambi usixelela ukuba uGoogle yeyona injini yokukhangela intle, kwaye ndiyakuvuma ukuba ndiyilandele. Kwangokunjalo, umhlambi uveza iimveliso ukuba ziyonwabile (nge-Apple) kwaye awonwabanga (GM, Ford).
Umbuzo ngulo, ingaba asonwabanga ngokulandela umhlambi, okanye ngaba ngequbuliso sishiya siziva sikhohlisiwe xa umhlambi ushiya oko bekulandela? Uninzi lwemizekelo engentla apho ilandelwe ngobuninzi ngumhlambi, kodwa ngoku iyashiywa ngobunzima kwangaloo mhlambi.
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2008 ngo-2: 29 PM
Ngokwenyani, andicingi ukuba amajelo osasazo ayimfuyo efanelekileyo - sonke sisasazekile kwiindawo zethu ezizimeleyo (nangona zinxibelelene) - iiblogi, i-twitter, ukubhukmakha kwezentlalo, ubuhlobo, inethiwekhi yeNing, i-Linked In, iPlaxo…. Ndicinga ukuba abantu bayacenga ukuba benze iindawo ezincinci 'zoluntu' apho bafumana khona abantu bathanda izinto ezifanayo, iinkolelo, imfundo, iitalente, iindlela zokuzonwabisa kunye nemvelaphi.
UGoogle ngokwenyani usika iziphumo ngokubhekisele kukuhambelana, amagama ahlukileyo- "ngexabiso eliphantsi" xa kuthelekiswa "nexabiso eliphantsi" linokubonelela ngeziphumo ezahlukileyo ngokupheleleyo zomntu oneenjongo ezifanayo zokukhangela… ngokusekwe kukhangelo 'olufana nolwabanye abantu kunye ne-backlinks evela kweminye imithombo. UGoogle mhlawumbi ungukumkani ongaphezulu weziphumo ezingekho mhlambi kwincwadi yam.
Ndiyavumelana nembono yakho yomhlambi. Ndiyathemba nje ukuba abantu abasayi kuwulandela ngamehlo umhlambi kwakhona… andithengiswanga ukuba iziphumo zihlala zilungile kunezimbi. Ndiyabathanda abantu ababuza umbuzo oqhelekileyo kwaye batyhale imvulophu.